Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia Azerbaijan » Azerbaijan dia mahita ampahany tsara amin'ny COVID-19 ihany koa
Hatramin'ny nipoahan'ny COVID-19 voalohany tamin'ny Desambra 2019, ny virus coronavirus dia nitete fa olona 2 tapitrisa eran'izao tontolo izao ary niely nanerana an'izao tontolo izao ka namoizana ain'olona 135,000 XNUMX mahery. Tsy nanomboka tamin'ny gripa Espaniola taonjato iray lasa izay, dia nisy areti-mandringana nahatonga izany fahasimbana izany tamin'ny mponina manerantany tao anatin'ny fotoana fohy.
Ho valin'ity krizy mitohy ity, firenena maro eran'izao tontolo izao dia naka fomba isan-karazany hanandramana hampihenana ny fihanaky ny viriosy, ao anatin'izany ny fanidiana ny firenena ary ny fanadinana mba hamaritana hoe iza no manana io aretina io. Noraran'ny EU ny tsy hiditra ao anatin'ny 30 andro na iza na iza ivelan'ny bloc, ary ny tatitra nataon'ny haino aman-jery farany teo dia nilaza fa ny faritra Schengen any Eropa dia tokony hihidy ny sisin-taniny hatramin'ny volana septambra. Firenena maro no nanambara fonosana ara-toekarena mbola tsy nisy toy izany mba hanohanana ny toekarem-pirenena, hiarovana ny asa ary hanohanana ireo orinasa. Namaly i Etazonia, na dia tara aza, tamin'ny alàlan'ny fanambarana fonosana fanentanana $ 2.2tn hanampiana amin'ny fananganana toekarena lehibe indrindra eran-tany; manakiana ny fahatsinjovan'ny varotra manerantany sy ny fanambinana ankapobeny. Ho fanampin'ireo fepetra voalaza etsy ambony ireo dia nanakatona ny besinimaro ny sekoly, nanala ny zaza ny fanabeazana tena lehibe ilain'izy ireo hamolavolana ny fiainany ho avy. Ny fitotonganana ara-toekarena ankapobeny izay manakaiky dia hiteraka fanamby amina miliara manerana an'izao tontolo izao.
Na eo aza izany, na eo aza ny fotoan-tsarotra sy sarotra atrehintsika rehetra ankehitriny, dia mbola misy antony tokony antenaina ihany.
Ny fihenan'ny aretina sy ny famongorana ireo fameperana
Ny fameperana any Wuhan, ilay tanàna sinoa nahitana ny COVID-19 voalohany, dia nesorina taorian'ny nandidiana azy efa ho telo volana. Any Espana, iray amin'ireo ivon-toeran'ny valan'aretina, ny fitomboan'ny aretina vaovao dia nianjera tamin'ny ambany vaovao hatramin'ny nanombohan'ny valan'aretina. Vaovao mampihetsi-po izany ary manondro fa firenena maro no voa mafy indrindra ary mitondra ny faran'ny virus dia mety nahatratra na teo an-tampon'ny tampon'ny aretina vaovao. Ny fetra mitokana sy ny fanidiana hidy izay misy fiatraikany lehibe eo amin'ny toekarena manerantany sy ny fiainantsika andavanandro dia tsy ho eto mandrakizay. Isika rehetra dia tsy maintsy miray hina sy maharitra ary tsy mieritreritra ireo mpiasan'ny fahasalamana eo amin'ny laharana voalohany izay manao vivery ny ainy ara-bakiteny mba hamonjy antsika. Mitondra dikany vaovao ilay teny hoe mahery fo.
Tontolo tsara fanahy
Na eo aza ny tahotra sy ny tahotra ateraky ny viriosy dia namporisika ny hatsaram-panahy koa izy io ary namela anay hijoro ho vavolombelona amin'ny lafiny tsara amin'ny zanak'olombelona. Ny ohatra ny tsy fitiavan-tena dia hita amin'ny famoronana "ora efa antitra" any Aostralia, ary "ora volafotsy" any Angletera any amin'ny fivarotana lehibe hiarovana ny zokiolona ary ahafahan'ny mpikambana marefo kokoa amin'ny vahoaka mividy fivarotana amin'ny toerana azo antoka kokoa. Any Italia, ny vondrom-piarahamonina iray manontolo dia hita nihira avy teny amin'ny lavarangana mba hanamafisana ny toe-tsain'ireo mpiray tanindrazana aminy, ka nahatonga ny fihetsiketsahana mpanao kopia erak'izao tontolo izao. Any Angletera, ny avana izay nolokoin'ny ankizy ho fanohanana ny serivisy ho an'ny fahasalamana nasionaly (NHS) dia nandravaka ny varavarankelin'ny trano, ary ny firenena iray manontolo kosa mijanona amin'ny 8 ora alina isaky ny alakamisy mba hijanona sy hitehaka ny mpiasa NHS manao vivery ny ainy.
Ny ankamaroan'izao tontolo izao dia niangona mba hanome anjara biriky sy an-tsokosoko amin'ny alàlan'ny asa an-tsitrapo hanampy ireo marefo indrindra. Hoy Andriamatoa Heydarov: "Faly aho milaza fa manoloana ny fandrahonana ateraky ny Coronavirus, Vondrona Gilan Holding dia milalao ampahany kely amin'ny fiezahana hampijanona ny fihanaky ny aretina. Miorina amin'ny fanoloran-tenanay ho an'ny andraikitra ara-tsosialy Corporate (CSR) sy ny fiarahamonina Azerbaijani midadasika, dia nanova ny toerana fandraisam-bahiny izahay mba hahafahan'izy ireo hampiasaina ho tranokala quarantine hanampy ny fitsaboana nasionaly ary koa Manat 1 tapitrisa ho an'ny tahirim-pirenena hiadiana amin'ny Covid -19. Ankoatr'izay, Gilan Textile Park dia nanova ny fizotrany hamokarana mba hanao akanjo fiarovana miisa 30,000 isan-kerinandro sy sarontava fandidiana 1 tapitrisa mahery. Na dia fihetsika kely aza ireo dia antenaiko fa hanampy amin'ny fampihenana ny fihanaky ny viriosy eto amin'ny tanindrazako ireo fihetsika ireo. ”
Fotoana nitomboan'ny fianakaviana
Noho ny fepetra napetraky ny governemanta sy ny fahatsinjovana ny dikan'ilay aretina, dia mandany fotoana bebe kokoa miaraka sy miara-mivory ny fianakaviana manerantany. Ny ray aman-dreny izay manana fiainana matihanina sahirana dia miasa any an-trano ny ankabeazany ary afaka mankafy fotoana faran'izay tsara, miaraka amin'ny fanelingelenana matetika amin'ny antso amin'ny kaonferansa ataon'izy ireo, avy amin'ireo zanany ao an-trano noho ny fikatonan'ny sekoly. Vokatry ny aretina mahatsiravina iray tsy nampoizina ny fanerena antsika hijanona sy hisaotra ny fianakaviantsika sy ny olon-tiantsika manoloana ny toe-javatra mahatsiravina atrehantsika.
Taorian'ny faharesen'ny COVID-19 - ary handresentsika azy isika - tsy hitovy intsony ny fiainantsika, miaraka amin'ny fanantenana ny fahatsapana fiarahamonina havaozina sy ny maha-zava-dehibe ny fandaniana fotoana tsara miaraka amin'ireo olon-tiantsika. Tapitra ny adihevitra momba ny fitoviana sy ny karama ara-drariny ho an'ny mpiasa eo aloha. Izy ireo no tsara indrindra amintsika. Raha mitranga izany dia hisy zavatra tsara hipoitra amin'ity voina ity. Ny toetra tsy an-kanavaka an'ity virus ity dia manasongadina ny maha-olombelona antsika sy ny fahamarinana tsy mety reraka fa miaraka isika. Tokony hijanona ho tafaray isika, hiara-hiasa ary hipoitra matanjaka kokoa amin'ny lafiny iray.
Vaovao momba ny dia Azerbaijan misimisy kokoa